Kooxda Aala-Sheekh oo isku raacay inay ku midoobaan musharaxnimada madaxweyne ee Sheekh Shariif - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Kooxda Aala-Sheekh oo isku raacay inay ku midoobaan musharaxnimada madaxweyne ee Sheekh Shariif
Kulan ay maalmihii ugu dambeeysay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ku yeesheen kooxda Aala-sheekh ayaa ugu dambeyn isku raacay inay ku midoobaan musharaxnimada madaxweyne ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Kooxda Aala-sheekh oo ka mid ah koox diimeedyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa muddooyinkii ugu dambeysay hareeyay qalalaase iyo khilaaf, waxaana hoos u dhac uu ku yimid doorkooda siyaasadda, kadib markii uu xilka baneeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Kooxdaan oo haatan aan xildhibaano badan ku yeelan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay taasi ugu wacan tahay dhaqaalo darro iyo kala daadsanaan soo wajahday.
Sidoo kale, kooxdaan ayaa haatan rajo weyn ka qaba in ololaha weyn ee ka dhanka ah dib usoo laabashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka saacidi doonto inuu markale xilka ku guuleysto Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Wareegii ugu dambeeyay ee doorashadii 2012-ka ayaa waxaa isugu soo haray Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoona doorashada dhici doonta sanadkaan la filaayo in markale ay labadaasi musharax isugu soo haraan wareega ugu dambeeya ee doorashada.